Mauricio Pochettino oo filaya in mid ka mid ah xidigaha Tottenham uu bixi doono suuqa kala iibsiga ee soo aadan – Gool FM
Mauricio Pochettino oo filaya in mid ka mid ah xidigaha Tottenham uu bixi doono suuqa kala iibsiga ee soo aadan
Dajiye October 15, 2018
(Tottenham) 15 Okt 2018. Tababaraha kooxda Tottenham Hotspur ee Mauricio Pochettino ayaa wuxuu filayaa in mid ka mid ah xidigihiisa ku sugan Spurs uu ka dhaqaaqi doono suuqa kala iibsiga ee soo aadan.
Wargeyska “The Sun” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in xidiga reer Belgiam ee Mousa Dembélé uu ku dhow yahay inuu u dhaqaaqo horyaalka Chinese Super League suuqa kala iibsiga ee soo aadan.
Heshiiska Mousa Dembélé ee kooxda Tottenham Hotspur ayaa wuxuu dhacayaa xagaaga soo aadan, kooxda Beijing ee horyaalka Chinese Super League ayaa si xoogan u xiiseeneysa saxiixiisa dhamaadka xili ciyaareedkan, iyadoo mushaar ahaan isbuucii u siin doonta £ 150,000.
Kooxda reer China ayaa isku dayday inay lasoo saxiixato Mousa Dembélé bishii Janaayo laakiin way ku guuldareysatay.
Sidoo kale kooxda Inter Milan ayaa iyadana isku dayday inay la saxiixato Mousa Dembélé xagaagii lasoo dhaafay ka hor inta uusan go’aansan inuu sii wato ka ciyaarista kooxda Tottenham Hotspur.
SAWIRRO NIYAD JAB KA MUUQDA: Maxamed Saalax oo u soo duulay England iyo Liverpool oo Wadnaha Farta ku heysa
“Lionel Messi waa dagaalyahan bahal ah, wuxuuna neceb yahay guuldarada” - Pep Guardiola